Home » Computers & Technology » Facebook search အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Facebook search အကြောင်း တစေ့တစောင်း
အစကတော့ Facebook Graph Search အကြောင်း ရေးမလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ပိုပြီး များများပြောလို့ရအောင် Facebook search အကြောင်းကို ပြောပါမယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Facebook က ကမ႓ာပေါ်မှာ လူသုံးအများဆုံး social network ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Facebook search ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင် များစွာ အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ Facebook ကိုလူတိုင်းသုံးတတ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် Facebook search ကိုတော့ ဘာရှာရမှန်း မသိတဲ့လူတောင် အများကြီးပါ။ လူနည်းစုကတော့ နည်းနည်းပါးပါး ရှာတတ်ပါမယ်။ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရှာတတ်တဲ့လူတော့ အတော်လေးကို ရှားပါမယ်။
ဆောင်းပါး တစ်ခုခုရေးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်လားလို့ အရင်စဉ်းစားပါတယ်။ အထောက်အကူဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို သိထားတာအပြင် လေ့လာဖြည့်စွက်ပြီး အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင် ရေးပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် အရသာပြည့်ဝအောင်လို့ပါ။ သိပ်မကြာသေးခင်ကလည်း ဒီ website မှာ “အင်တာနက် (မရှိမှ) ဆော့လို့ရမယ့် Google Chrome ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဂိမ်း” ဆိုတာကို ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
အရင်ဆုံး Facebook search ကို features အပြည့်အဝ သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Language ပြောင်းရပါတယ်။ Facebook က အမေရိကန်နိုင်ငံသား မာ့ခ် အဲလိယတ် ဇတ်ကာဘာ့(ဂ်) တည်ထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Language ကို English(US) လို့ထားမှ Facebook search ကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ English(UK) ဆိုရင်တောင် မရပါဘူး။ ဒါက Facebook graph search အပါအဝင် search features အစုံအလင် သုံးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပါ။
Facebook language ပြောင်းဖို့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အကောင့်ကို facebook မှာ ဝင်ပြီးတော့ https://www.facebook.com/settings?tab=account ကို သွားရပါမယ်။ General Settings ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရပါမယ်။ Language ဆိုတဲ့နေရာမှာ English(US) ဖြစ်နေအောင် ရွေးထားရပါမယ်။
Language ရွေးပြီးသွားရင်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အပိုင်း စတင်ပါပြီ။ Facebook search နဲ့ ရှာလို့ရတာတွေ အကုန် သုံးလို့ရပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ရှာတယ်ဆိုတာ လိုချင်တာရိုက်ပြီးရင် အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း မှန်ဘီလူးလေးနဲ့ ပေါ်လာတဲ့စာတန်းကို နှိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေရှာလို့ရလဲဆိုရင် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အကုန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် –
ဥပမာ အရင်က အောင်အောင် Sule Shangrila Hotel မှာ check-in ဝင်ထားတာ မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်။ ဘယ်နေ့ကလဲ၊ ဘယ်အချိန်ကလဲ၊ စတာတွေအပြင် တင်လိုက်တဲ့ post ကိုပါ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကပုံမှာတော့ နမူနာ ရှာပြထားပါတယ်။
1 ကတော့ ရှာထားတဲ့ စကားလုံးပါ (နာမည် at sedona ball room)
2 ကတော့ search filters တွေပါ။ လူတွေချည်းသက်သက်၊ ဓာတ်ပုံတွေချည်းသက်သက် စသဖြင့် ရွေးရှာနိုင်ပါတယ်။
3 ကတော့ ရှာလိုက်တဲ့အတိုင်း Sedona Hotel ရဲ့ Grand Ball Room မှာ check-in ဝင်ခဲ့တာကို တွေ့ရမှာပါ။
4 ကတော့ check-in ဝင်ခဲ့တဲ့ Date ပါ။
5 ကတော့ Like & Comment အရေအတွက်ပါ။ နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် like ထားတဲ့သူတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ comment တွေပါ ဖတ်နိုင်ပါသေးတယ်။
သူများမျက်လုံးနဲ့ ကမ႓ာလှည့်မယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတစ်ခုခုကို ရှာလိုက်ပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင် သူတို့တင်ထားတာ မြင်ရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ် like လုပ်ထားတဲ့ page တွေက တင်ထားတယ်ဆိုရင် မြင်ရပါမယ်။ Google မှာရှာတာနဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေတင်ထားတာတို့၊ သာမာန်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်တင်တာတို့ဆိုရင် ပိုပြီး သဘာဝကျကျ တွေ့ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Google ကလည်း အတော်ကလေး အသုံးဝင်တဲ့ Search engine တစ်ခုပါပဲ။
အောက်မှာတော့ နယ်သာလန်ရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Amsterdam ကိုရှာထားတာပါ။ ဆန်းသစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကြောင့် နာမည်ကြီး လူသိများတဲ့ မြို့ပါ။
သူငယ်ချင်း အဟောင်းတွေ အသစ်တွေ ရှာမယ်
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကိုယ့်အကောင့်ထဲက လူနာမည်တွေ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ post တွေ ပေါ်လာမှာပါ။ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေဆိုတာကတော့ ဥပမာ Myo လို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ Myo နဲ့စတဲ့လူတွေ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ် add ချင်တဲ့လူကို Add friend လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါလည်း ရှင်းပါတယ်။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ရိုက်ပြီးတော့ ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်
စသဖြင့် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ရိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Facebook search ကို ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးတတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source: မယုံနိုင်အောင် အသုံးတည့်တဲ့ Facebook search
.ဖွေးဖွေးကို ရှာတာ အတုတွေချည်း ထွက်လာတယ်
အစစ်ရှာနည်းလေးရော ပြောပြရင် ကောင်း၏
အစစ်ရှာနည်းရယ်လို့တော့ မရှိဘူးဗျ၊ ရှာလို့ ထွက်လာတဲ့ထဲက page တွေကို အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ တိုက်စစ်လိုက်ပါ။
၁။ page နာမည်ဘေးမှာ အမှန်ခြစ် ပါ/မပါ (အမှန်ခြစ်ပါရင်တော့ အစစ်ဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ)
၂။ like အများဆုံး နဲ့ ကြော်ငြာမတင်တဲ့ page ကို အစစ်လို့ မှတ်လိုက်ပါ။
ဖွေးဖွေးအစစ်ရဲ့ page ကတော့ https://www.facebook.com/phwayphway.for.fans မှာပါ။
သိပေမယ့် မသုံးဖူးသလောက်ရှိတာမို့ ဒီပိုစ့်က အကျိုးများ အသုံးတည့်တဲ့အပြင်….
နည်းပညာကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာရေးသားရှင်းပြသွားလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ဆာ့ချ်​အင်​ဂျင်​ဆိုတာ ဘာရှာရှာ ကြိုက်​တာ ရှာလို့ရတယ်​ဆိုပြီး အဲ့အ​ပေါက်​ထဲကို “က” ကြီး “ခ'” ​ကွေး ရိုက်​ပြီး ရှာပြလိုက်​တာ ဟီး လူကြားထဲ အရှက်​​တော်​ ဗျန်​းဗျန်​း ကွဲ ဖူးလို့ပါ
အရင်တုန်းကတော့ မရှာဖူးဘူး၊ ခုတော့ Google မှာ ရှာလို့ရနေပါပြီဗျ။ အရင်လူတွေကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပါဦး …
အဘနီ ပြောသလို “က” လို့ ရိုက် ရှာလိုက်တာ John C ဆိုပြီး ထွက်လာရော။
ရှိပြီးသား တွေ တောင် မျက်စိ နောက်လာပြီး ဘယ်လို ဖြုတ်သင့်တယ် တွေးနေတာ။
တစ်ချို့ကိုတော့ follow ကို disable လုပ်ထားရတယ်။
. အိုဗာလော်ဘီ ရွှယ်ဖား တွေ ဖြစ်နေလွန်းလို့။
ဒီလို ဗဟုသုတလေး တွေ မျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မောင်ဝက် ရေ။
နာမည် လေး ကို မကြိုက် ရင် ခွေးလွှတ်ပြီး ခေါ်လို့ကောင်းမဲ့ နာမည် ပေးပါ။
Search Engine ကိုတော့လေ အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ပြီးကြောင်း ဒီပို့စ်ကိုလည်း ဖတ်သွားကြောင်း။
gmail account ကို ဘဲ သိနေတာ ဆို ရင် ကော ဘယ်လို ရှာလို့ ရပါသလဲ
နောက်ပြီး နံမည် အသစ် ရိုက် ထည့် ပေမဲ့လည်း မပေါ် တာ တွေ ကော ဘယ်လို ရှာလို့ ရပါသလဲ ။ နံမည် တစ်ခု ရိုက်ထည့် ရင် ကိုယ့် သူငယ်ချင်း ထဲ က သူငယ်ချင်း ဖြစ် နေရမယ် မဟုတ်လား ။
face book အသစ် စလုပ် တဲ့ သူ အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မရှိနိုင်သေးတဲ့ အခါမှ ဖြစ်တတ်တာပါ ။
Gmail လိပ်စာအတိုင်း ထည့်ပြီးရှာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးရှာမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး တိတိကျကျ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Gmail လိပ်စာနဲ့ ရှာလို့မှ မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဖြစ်နို်င်တာ နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။
၁) တစြ်ခား Gmail အကောင့် (သို့) မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ကို သုံးပြီး facebook ဖွင့်ထားတာ
၂) ရှာတဲ့အကောင့်နဲ့ ဖွင့်ထားပေမယ့်လို့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က သူ့ကို Gmail နဲ့ ရှာလို့ မရအောင် ပိတ်ထားတာ
တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Facebook မသုံးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသုံးတဲ့လူကလွဲလို့ အဲလိုလူတွေ ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ ရှာချင်တဲ့လူက အောင်အောင်၊ သူအလုပ်လုပ်တာက မန္တလေး ဂေဇက်၊ နေတာက ရန်ကုန်မှာ နေတယ်ဆိုပါစို့ –
3) အောင်အောင် Mandalay Gazette
စတာတွေနဲ့ ရှာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြား သူတို့တက်တဲ့ကျောင်းတွေနဲ့လည်း တွဲပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။
search ကို သုံးတယ်ဗျ ဒါပေမင့် သိပ် စိတ်​တိုင်းမကျဘူး
ကိုယ်​ပဲ keyword တွေ တိတိကျကျ မထည့်လို့ လို့ပဲ မှတ်​လိုက်​ပါတယ်
ပို့စ် အတွက် ကျေးကျေးပါ ကိုရင်လူခါး
Facebook Search အကြောင်း ရေးပေးထားတာ
ခုက Facebook ခေတ် ဆိုတော့
Facebook သုံးနေရင်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာလို့ ရနိုင်တာပ ….